Izizathu ezi-8 zokufunda ngakumbi amabali kunye namabali | Uncwadi lwangoku
Izizathu eziyi-8 zokufunda ngakumbi amabali kunye namabali
Inoveli ibonakala ngathi luhlobo lweenkwenkwezi kwiivenkile ezithengisa iincwadi kunye namakhaya, kodwa ngenxa ye-Intanethi kunye nababhali abatsha, ilizwe liqala ukuqaphela (kwakhona) ukuba ibali elifutshane luhlobo oluyimpumelelo kunokuba beluthathelwe ingqalelo kwiminyaka yakutshanje. phakathi koluntu ngokubanzi. Ngaba uyafuna ukuzazi ezi Izizathu eziyi-8 zokufunda ngakumbi amabali kunye namabali?
1 Ibali alifani nebali labantwana
2 Amabali amaninzi kwincwadi enye
3 Zonke ii-greats zazingababalisi bamabali ngaxeshanye
4 Into ekhanyayo phakathi kweenoveli
5 Ubugcisa bobuqili
6 Unokuzifunda kwakhona
7 Umgangatho ophezulu wokubhala
8 Uncwadi lwasimahla
Ibali alifani nebali labantwana
Abantu abaninzi babona igama "ibali" libhaliwe kwiphepha elingaphandle kwencwadi kwaye ngempazamo bacinga ukuba lijolise kwabancinci; kodwa hayi, bukhona ubomi ngaphaya kwe-Little Mermaid kunye noHansel noGretel. Ngapha koko, amabali kunye namabali abumba indawo ebaluleke ngakumbi kunoncwadi njengoko ayeyinto ephindaphindwayo kumaphephandaba nakwii-gazette zenkcubeko de kwaba phakathi kwinkulungwane yama-XNUMX, nangona kule minyaka idlulileyo kuye kwakho ukonyuka koloyiko kuhlobo olo kubulela ababhali njenge UAlice Munro, uPaulina Flores okanye, ngakumbi e-United States, uGeorge Saunders. Ibali libali elifutshane eliza kuthi ke lahlulwe libe ziindidi ngeendidi zabaphulaphuli; ukusuka kwiminyaka 0 ukuya 100.
Amabali amaninzi kwincwadi enye
Siqala inoveli enomdla kuthi ngenxa yezizathu ezithile ngelixa kwelinye icala, ukugqobhoza ngaphezulu okanye iziqwenga ezingathandekiyo zisibangela ukuba "sisebenze" ukujongana nomthamo wonke ukuya kwiphepha lokugqibela, ngamanye amaxesha ngenxa yokuzinikela okungaqhelekanga kwabafundi Unencwadi, abanye kuba ibali lifanele ukugqitywa ngaphandle kwe "buts" ezithile. Ngencwadi yamabali iziphelo ziza ngaphambili kwaye ukubanakho kokukhetha izinto kwincwadi enye kuye kube yeyona nto ikhuthazayo yokubhala.
Zonke ii-greats zazingababalisi bamabali ngaxeshanye
Ngaba uqinisekile ukuba ungangena ebalini kodwa awunalo ixesha lokudlala iBuendía de Cien años de soledad? Emva koko funda Iintsomi ezilishumi elinambini zePilgrim, nguGabriel García Márquez. Kwakhona uCuentos de Eva Luna, ngu-Isabel Allende, Todos los fuegos el fuego, ngu-Julio Cortázar, okanye i-Tale epheleleyo ngu-Isaac Asimov, ukubiza nje imizekelo embalwa engqina ukuba ukubalisa amabali (phantse) wonke umbhali owaziwayo ngamanye amaxesha.
Into ekhanyayo phakathi kweenoveli
Ubuncinci kuyenzeka kum ukuba, emva kosuku olude emsebenzini, andiziva ngathi "ndicinga" kakhulu. Kukho iifilimu ze-metaphysical, iinoveli ezinde okanye izinto ezithandwayo ezinomdla kakhulu kodwa zinzima kakhulu kwingqondo efuna izinto ezikhanyayo ngexesha elithile losuku. Funda uncwadi olufutshane, ngakumbi amabali okanye amabali, kusinceda ukuba siqale kwaye sigqibe ibali ngexeshana elifutshane, sijike ibali libe luhlobo loncwadi olukwazi ukuziqhelanisa nesingqisho sanamhlanje.
Kwinoveli kuyimfuneko ukuba yonke into ibotshelelwe kakuhle kwinto elula yokuba isiphelo esingakhululwayo sinokuqhawula umsonto obalisayo sele umde kwaye uxinene ngencwadi. Nangona kunjalo, ngamabali, izinto zahlukile, kuba ngokugubungela kancinci kwaye ugxile kwimeko ethile, umbhali unokungena nzulu kubuntu be-protagonist, ayithande imfundiso enomdla ngakumbi kodwa, ngakumbi, vumela umfundi ukuba enze eyakhe Ukutolikwa kwakhe, ejonga kobu buqili acetyiswayo kodwa akazange asityhilele. Ewe, kunokwenzeka ukuba amabali amaninzi aqukethe inoveli emva kwabo abangazange basixelele yona.
Ukuba silithandile ibali, jonga iimfundiso elibandakanya okanye ukukwazi ukusihambisa, ukuphinda ulifumane kwaye ulifunde kwakhona kulula. Ngapha koko, unokufumana iinkcukacha ezincinci ongakhange uziqonde xa wawufunda.
Umgangatho ophezulu wokubhala
Ngaphandle kokuba mfutshane, ibali lifuna izixhobo zokusebenza: uxinzelelo olukhulu, abalinganiswa abambalwa kodwa, ngakumbi, ukubanakho ukutsala umfundi kulayini ngamnye wayo. Ngesi sizathu, ibali elilungileyo limele ukuba loluphi lolunye lolona hlobo lubalaseleyo kwaye, ke ngoko, lolona mgangatho uphezulu kwihlabathi loncwadi.
Kwaye, andithethi ngobuqhetseba. Namhlanje kukho iwebhusayithi engaphezulu kwesinye apho ababhali abaninzi abangaziwayo babalisa amabali kunye namabali amafutshane okhuthazayo omgangatho wawo unokuchongwa ngokuthandwa okanye, ngokulula, ngokubeka emngciphekweni ukulazi. Ukuba nawe uyabhala, iiwebhusayithi ziyathanda Inkohliso Banokuba ngamadlelane amahle ekufumaneni isicatshulwa esitsha semihla ngemihla ngelixa ukhuthazwa ukuba uqalise ukubhala eyakho.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » Iincwadi » Ezahlukeneyo » Izizathu eziyi-8 zokufunda ngakumbi amabali kunye namabali
UJose solozabal sitsho
Inomdla kangakanani into yokuba incwadi ibambe ngokupheleleyo, ngokobuqu mva nje ndifunde ababhali abatsha kuphela. Kuya kufuneka ubanike ithuba kwaye amaxesha amaninzi uyamangaliswa ziigugu onokuzifumana. Kutshanje ndiye ndafunda Imfihlo yePainite (uJulio Carreras). Icacile kwisitayile kwaye kulula ukuyifunda. Ibali elinomdla elisebenza kakuhle. Ndiyincoma kuwe.
Phendula kuJose Solozabal
NguYesu Gonzalez sitsho
Ilizwe elinomdla nelinoncwadi lihlala limelwe ngohlobo olubonakalayo lwencwadi, ngaphandle kwe "charretaras", zesalathiso sombhali, lihlabathi eliyimfihlakalo nelinomdla elisimemayo ukuba sihlale kunye, silifumane kwaye silifake ngaphakathi. Amagama awanelanga Ukuchaza ezona mvakalelo zimnandi zibandakanya ukufunda.Uhambo oluhle kakhulu olusisa kwiindawo ezingacingelwanga.
Phendula kuYesu Gonzalez
Yazi iwebhu eqikelela incwadi onokuyithanda
Iilayibrari ezilishumi ezilungileyo eYurophu